Rail Sheba Apk Download Ho an'ny Android  - Luso Gamer
Raha avy any Bangladesh ianao ary te hividy tapakila an-tserasera amin'ny findainao dia ho anao manokana ny lahatsoratra anio. Satria nizara app izay ahafahan'ny mpampiasa azy mividy tapakila Railway aho ary io fampiharana io dia "Rail Sheba Apk" ?? ho an'ny Android.
Azonao atao ny misintona ny kinova vaovaon'ny App amin'ity lahatsoratra ity. Tena maimaimpoana io fa tsy maintsy mandoa fa tsy maintsy mandoa tapakila hividianana tapakila. Ity fampiharana ity dia misy ho an'ny faritra rehetra any Bangladesh izay misy ny lalamby lalamby.
Raha manana izany asa izany ao amin'ny faritra misy anao ianao na te handeha amin'ny alàlan'ny serivisiny dia azonao atao ny mahazo tombony amin'ity fampiharana ity. na izany aza, ankoatry ny mpampiasa Bengali tsy afaka mampiasa azy io.
Satria voatokana ho an'ny firenena izy io ary tsy misy afa-tsy amin'ny olom-pirenen'ny firenena izay voalazako teo aloha.
anarana Rail Sheba
Developer Ny sandan'ny anjara Computer Network Systems Limited
Anaran'ny fonosana com.cnsbd.railsheba
Android takiana 4.4 ary ny
Momba ny Rail Sheba
Izy io dia vokatra ofisialin'ny Computer Network Systems Limited izay atolotra azy ireo amin'ireo mpampiasa azy. nametraka an'io fampiharana io izy ireo volana vitsy lasa izay.
Noho izany, ao anatin'ny fotoana fohy, mihoatra ny tsy ampy ny olona no nampakatra ity App ity avy amin'ny Play Store. Afaka misoratra anarana ny tenanao ianao amin'ny alàlan'ny telefaona findainao raha alefa aminao ny antsipirian'ny tapakila amin'ny alàlan'ny mailaka na hafatra an-tsoratra.
Ity fampiharana ity dia ahafahanao mividy tapakila marobe raha manandrana ny hividy azy ireo koa ho an'ny fianakavianao ianao. Ny fomba fandoavam-bola koa dia tena tsotra sy mora.
Satria ianao dia afaka mandoa ny vola amin'ny alàlan'ny karatra VISA, Master Card, Amex Card, ary bKash. bKash sy Amex no serivisy fandoavana vola amin'ny Bangladesh izay manome fomba haingana kokoa handoavana ny volavolan-dalàna.
Betsaka ny fomba maro hafa ahafahanao mandoa vola fa ny fomba nizaraiko dia no mety indrindra aminao. Satria haingana sy manan-danja kokoa izy ireo ary azo itokisana.
Maninona raha ampiasao ny Rail Sheba Apk
Betsaka ny antony mahatonga an'io fampiasana tsotra io amin'ny fividianana lisitra. Fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe manome izany ny fotoana sy ny herinao. Satria mety efa nitory ianao fa misy hatrany ireo andian'olona be dia be miandry miandry ny anjarany any amin'ny gara.
Noho izany, tena mila fotoana sy hery be dia be izy io nefa indraindray tsy maharitra rehefa miandry fotoana ela. Noho izany, ny Rail Sheba Apk no hany loharano ahafahanao mahazo ny takoo ao anatin'ny minitra vitsivitsy.
Tsy mila mandalo dingana sarotra sy mandany fotoana ianao. Noho izany dia mila mahazo fisoratana anarana ihany ianao ary avy eo miaraka amin'ny paompy tokana dia afaka mandefa anao ny antsipirian'ny tapakila rehetra.
Ankoatr'izay, azonao ny fotoana voatondro ho an'ny fiara sy ny zavatra lehibe hafa ara-potoana. Alefany aminao ny tsipiriany rehetra amin'ny laharan'ny telefaona na amin'ny alàlan'ny mailaka anao.
Araka ny efa nambarako fa raha te-hampiditra ny serivisy amin'ity fampiharana ity ianao dia mila mahazo fisoratana anarana amin'izany. Noho izany, misy fomba tsotra ny fahazoana misoratra anarana ao aminy. Raha manaraka an'ireto dingana nomena ireto tsirairay avy ianao dia mahavita soa aman-tsara.
Voalohany indrindra, alaivo ity lahatsoratra ity Apk.
Apetaho amin'ny telefaona.
Tsindrio ny Sign up raha vaovao ianao.
Avy eo ampidiro ny laharan'ny findainao, ny mailaka, ny anarana sy ny pitsopitsony hafa
Ampidiro ny tenimiafina matanjaka.
Ampidiro ao anaty boaty faharoa ihany koa izany tenimiafina izany.
Tsindrio ny bokotra Sign Up.
Raha te-hamonjy ny fotoana sy ny herinao ianao rehefa maka ny tapakilananao any an-trano, dia tsy maintsy alaina ity fampiharana ity. dia fampiharana maimaim-poana izay azonao alaina fa tsy maintsy mandoa ny vidin'ny tapakila ianao. Tsy mandeha amin'ny Internet izany, noho izany, mila fifandraisana Internet ianao.
Na izany aza, io dia miasa mihitsy amin'ny fifandraisana internet malemy. Raha te misintona ny kinova farany Rail Sheba Apk ho an'ny Android ianao, dia tsindrio ny bokotra download eto ambany.
Sokajy Apps, Travel & an-toerana Tags Rail Sheba, Rail Sheba Apk, Rail Sheba App Post Fikarohana